Wajiga maka bedeli laheyd saaxiibtaa haddii ay ka saarto Sawirkaada boggeeda Facebook?… – Hagaag.com
Wajiga maka bedeli laheyd saaxiibtaa haddii ay ka saarto Sawirkaada boggeeda Facebook?…
Posted on 12 Janaayo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Gabdh dhalinyaro British oo reer Liverpool ah ayaa shaaca ka qaaday sheeko ku saabsan sidii laad loola dhacay wajigeeda oo laga daatshay ilkaheeda, kadib markii uu weerar ku qaaday saaxiibkeeda xanaagsan, maxaa yeelay waxay bedeshay sawir ay ku wada jireen oo ugu dhignaa boggeeda Facebook.
Ka hor sanad iyo badh, ayuu weeraray Andrew McNair (29 sano), saaxiibtiisa hore Lord Ashton kadib markii uu ogaadey in ay bedeshay sawirkoodii ugu dhegenaa boggeeda oo ay ku bedeshay mid keeda keliya ah.
Ashton ayaa habeenkii la qaadatay asxaabteeda qaar ka mid ah, markay guriga ku noqotay ayey go’aansatay in ay bedesho sawirka profile-ka ee u gaarka ahaa facebook, waxay ka saartay kii ay iskula jireen saaxiibkeeda, iyada oo aan ogeyn in taasi ay dhalin doonto carradiisa, maalintii ku xigtay subaxnimadii ayuu soo weeraray asaga oo u geystay dhibaato xoog leh, hadda waxay ku qasbanaatay in ay xirato ilko macmal ah “kuwa la geliyo oo laga bixiyo”.
Waxay sheegtay in ayaamihii hore in xaalkoodu dhag dhag ahaa, “laakin markii muddo wada soconay waxaan xasuustaa oo aan ku arkay asaga oo wajiga iga dharbaaxay, laakin markan waa waqtigii ugu horeeysey oo laad madax igala dhaca”.
Waxay u sheegtay wargeyska “Daily Mail” oo Britain ka soo baxa maalintii Sabtiga “waxay aheyd in aan markaasi ka tago, laakin wuxuu ku waashtay telefoonkeyga inuu maalintii oo idil garaaco oo ooyo isla markaana ka shalaayo wixii uu sameeyey, i weydiistay cafis”.
Ashton ayaa ka baqday in ay booliska ku wargeliso, halkii sidaasi yeeli laheyd waxay u guurtay guryaha lagu difaaco haweenka lagu dhibaateeyo guryahooda.
Laakiin markii hanjabaadiisa ku badatay ayey ku wargelisay booliska, waa la xiray, wuxuu ka soo muuqday maxkamada horteeda bishii November 2017, waxaana lagu xukumay xabsi 36 bilood kadib markii uu qirtay dambiga.
Ashton oo hadda ka cabanaysa xusuustii hore, argagax iyo cabsi qabta, waxay ka baqdaa in ay ka baxdo gurigeeda ama dadka kor u fiiriso, taasi waxay kor u kicisay dambiilaha oo la sii daayay markii uu xirnaa 11 bilood.